त्रिशुली अस्पतालको लापरबाहीका कारण नवजात शिशुको मृत्यु, अस्पतालको ब्यवस्थापन लथालिङ्ग - सुनाखरी न्युज
त्रिशुली अस्पतालको लापरबाहीका कारण नवजात शिशुको मृत्यु, अस्पतालको ब्यवस्थापन लथालिङ्ग
Posted on: July 6, 2021 - 8:36 pm
सुनाखरी न्युज/ नुवाकोट – नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालको लापरबाहीका कारण नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । देशकै उत्कृष्ट अस्पतालको रुपमा नाम कमाएको त्रिशुली अस्पताल व्यवस्थापनको लापरवाहीको कारण मंगलवार विहान एक नवजात शिशुको मृत्यु भएको हो । विहान त्रिशुली अस्पतालमा प्रशव बेथा लागेर अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आएकी विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १० वेत्रावतीकी आरती मगरले अस्पतालमा वत्ती नभएका कारण बच्चा गुमाउनु परेको हो ।
मंगलवार विहान करिव ३ बजेतिर अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आइपुगेकी आरतीलाई बत्ती नभएकै कारण डा. मधुकर दाहालले शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउन नसक्ने भन्दै फर्किएको आरतिका श्रीमान नकुल मगरले बताए । उनले आफुले अस्पतालकै लापरवाहीको कारण बच्चा गुमाउन परेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले घटनाको दोषीलाई कारवाही र पिडित पक्षलाई न्यायको माग गरेका छन् । यस्तै आरतीका छिमेकी अष्टमान डंगोलले अस्पतालमा विविध कारण देखाएर बच्चा र आमाले ज्यान गुमाउनु दुखद घटना भएको भन्दै त्यलाई सच्चाउन अस्पताल प्रशासन लाग्नुपर्ने बताए । उनले अस्पताल प्रशासनले बत्ती नभएको र इन्धन समेत सकिएको वाहाना बनाएर उम्कन नहुने बताए । यसमा अस्पताल प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विद्युत लाईन काटिएको र १२ जेनेरेटर चलाउँन इन्धन अपुगका कारण घटना घट्यो : मेडिकल सुपरिटेन्डेन पाण्डे
त्रिशुली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. दिपेन्द्र पाण्डेले अस्पतालमा विद्युत लाईन काटिएको र १२ घण्टा लगातार जेनेरेटर चलाउँदा इन्धन अभावका कारण अस्पतालमा दुखद घटना घटेको बताए । उनले अस्पतालमा दक्ष जनशत्ति अभावका कारण यस्ता घटना घटिरहेको भन्दै सबैले पहल गरेर जनशत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
अस्पतालको ब्यवस्थापन लथालिङ्ग
देशभरमै नम्बर वान बनेर चर्चा कमाएको त्रिशुली अस्पतालले केन्द्रबाट अनुमगन टोली आउँदा सबै व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन टोलीलाई निरिक्षण गराउने र त्यसपछि सबै कुरा लथालिङ्ग हुने गरेको खुल्न आएको छ । यसअघि गत साता मात्रै सुर्यगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की एक युवतीको पोष्टमार्टम गर्न अस्पतालले दुईदिनभन्दा समय लगाएर लापरवाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्तले अस्पताल प्रशासनमा धर्ना दिएका थिए ।
सोमबार मात्रै भिडियो एक्स्रे गर्नु पर्ने बिरामि तथा गर्भवती महिलाहरुलाई एक्स्रे गर्नी डाक्टर नभएको भन्दै भोलि आउनु भनेर फर्काइएको थियो । यस्तै भिडियो एक्स्रेका लागि नगद रसिद लिगेसकेकाहरुलाई समेत काउण्टरमा गएर रकम फिर्ता लिगेर भोली आउनु भन्दै फर्काइएको थियो ।